'लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नभए देशका लागि राम्रो हुँदैन' | Setoshikhar
‘लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नभए देशका लागि राम्रो हुँदैन’
सेताे शिखर संवादाता द्वारा २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २१:५८ मा प्रकाशित
तर अहिले समितिको निर्देशन नै कानुन विपरीत रहेको पनि चर्चा चलेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने लोकसेवा आयोगले अगाडि बढाएको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संविधानसम्मत रहेकाले रद्द नहुने संकेत गरेको छ। प्रस्तुत छ, यसै विषयमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँगथाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः
तपाईंको समितिले गरेको निर्णय कानुन विपरीत आएको रहेछ, यस्तो किन भयो?
यो एकदमै हुँदैन। यस्तो भयो भने त ‘चेक’ गर्ने हो। करारका निम्ति पनि निश्चित मापदण्ड हुन्छ। अस्ति श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि करारमा नियुक्त गरेको थिए। त्यसमा कहीँ विवाद भयो? आफन्त नातागोतालाई नियुक्त गर्‍यो भनेर कहीँ कतै छिसिक्क कुरा आयो? निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो नि त। राज्य दह्रो नहुने, लुप होल्स छोड्ने अनि आफू यस्ता कुराहरू गर्ने अनि अर्कालाई दोष थोपरेर पाइन्छ? निश्चित मापदण्ड बनाएर गरे त हुने रहेछ त। मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो। योग्य छ भने हाम्रा सन्तान पनि प्रतिस्पर्धामा आउछन्, अयोग्य छन् भने जो कोही भए पनि आउन भएनन्। हाम्रो कुरा यो हो। मान्छे हेरेर विधि बनाउने होइन। विधिमा मान्छे सेट हुनुपर्‍यो भन्ने हो। विधि नबनाउने अनि एउटा, दुइटा कमजोरी हेरेर समग्रतामा विश्लेषण गर्न मिल्छ? मिल्दैन।
यो एकदम होइन। तपाईंहरूलाई भ्रममा पारिएको छ। एकदमै भ्रम छरिएको छ। यहाँ गरिएको के हो भने मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर एउटा फ्रेम बनायो। तपाईंलाई डकुमेन्ट नै दिन्छु नि म। वैशाख पहिलो हप्ता ‘श्री स्थानीय तहहरू…’ लेखेर सबै स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गरेर माग फाराम पठाउ भनेर यहाँबाट माग गर्‍यो।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले संघीय लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ, यसको विपरीत समितिको निर्देशन भयो नि?http://thahakhabar.com/news/71560?fbclid=IwAR3nCk8cwmt7CxUcszc2Q5tkycRJYeCpvkpD2ullcfnN9BfZ5WW31ohjJPE